“Wuxuu Caddeeyey Inuu Kordhinta Heshiiska U Qalmayey” – Ole
Ole Gunnar Solskjaer ayaa amaan kula dul dhacay weeraryahanka kooxdiisu heshiiska amaahda ah dhowaanta u kordhisay ee Odion Ighalo.
Weeraryahanka reer Nigeria ayaa dhaliyey gool kulankii Norwich City, waxaanu ahaa goolkiisii shanaad ee Manchester United uu u dhaliyo tan iyo bishii January, xilligaas oo ay Red Devils heshiis amaah ah kaga soo qaadatay kooxda reer China ee Shanghai Shenhua.
Kooxda reer China ayaa doonaysay inay dib u ceshato Ighalo marka ay dhamaadaan heshiiskii amaahda afarta bilood ahaa ee ku ekaa dhamaadka bishii May, laakiin waxa labada kooxood ay isla af-garteen in illaa bisha January ee sannadka dambe uu Ighalo sii joogo Old Trafford.
Ole Gunnar Solskjaer oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kooxdiisu ay sax ku ahayd inay Ighalo heshiiskiisa amaahda kordhiyaan, waxaanu yidhi: “Inaan ilaashado Ighalo muhiim ayay ii ahayd, si adag ayaananu uga shaqaynay. Waxay ila tahay in Odin uu garanayo sida badan ee aanu u qiimaynayno iyo sida qolka lebbiska iyo garoonka dhexdiisaba looga tixgeliyo.”
Kordhinta heshiiska amaahda ah ee Ighalo, waxa Manchester United ka caawisay dawladda China oo waqtigaas soo rogtay in dadka ajaanibka ah aanay dalkaas kyusoo laaban karin illaa bisha October.
Ole Gunnar Solskjaer waxa uu qirsan yahay in Ighalo uu yahay dhaliye dabiici ah oo awood badan, qaynta ka qaadan kara qaab ciyaareedka kale ee kooxda, waxaanu yidhi: “Waa gool-dhaaliye, xoog badan oo kubaddana u ciyaari karaya sidii aanu samaynay goolkii guusha, markaas oo uu ismuujiyey, Paul na uu helay.
“Si wanaagsan ayuu u icyaaray, waxaanu sidoo kale isiiyey fursad aan iskugu wareejiyo Marcus, Atnhony iyo Mason, markaa ciyaar kasta waanu firfircoonahay.”
Ugu dambayn, waxa uu Ole Gunnar Solskjaer ka hadlay semi-finalka FA Cup ee ay kooxdiisu u gudubtay, ayna isku beegmeen Chelsea, waxaanu ku dooday in dhiigga kooxdiisa ay ku jirto guushu.
Tottenham Oo Guul Ay Ku Dhibaatootay Ka Gaadhay Everton,
10ka Difaac Ee Ugu Goolasha Badan, Halka Uu Kaga Jiro…